विचार – Etajakhabar
त्रिभुवन विमानस्थलमा किन राखियो पाइलटलाई झुक्याउने नाम ?
बुधबार, फाल्गुण ३०, २०७४
मिन बहादुर पण्डित - म एउटा अनुभव सेयर गर्न चहान्छु । मैले सन् २०१३ तिर कतारमा एउटा स्पेनिस कम्पनीको लन्ड्रीमा (Pressto) अप्रेशन सुपरभाइजरको जागिर गरेको थिएँ । जँहा दिनमा १२ सयवटा सम्म कपडा आउँथ्यो । मानौँ, एक ग्राहकको १० वटा कपडा छ भने हामी एउटै नम्बर राखेर मार्किङ् गर्थ्यौँ । अनि ड्राइक्लिनिङ्ग र प्रेसिङ सकेपछि प्याकिङ्गको बेला मात्र नम्बर हेरेर कपडा छुटयाउथ्यौँ । यो लन्ड्रीको अन्तर्राष्ट्...
ज्ञानेन्द्र शाहको पुस्तक
युवराज गौतम नेपालका ‘अन्तिम राजा’ वा ‘पूर्वराजा’ भनेर सम्बोधन गरिने ज्ञानेन्द्र शाह हाल झापामा छन् । उनको विगत र आगतबारे बेलाबेलामा सञ्चारमाध्यममा अनेक रोचक चर्चा र प्रसंग आउने गरेका छन् । राजदरबारको छत्रछायामा उच्चपदमा बसेर प्रशस्त सम्पत्ति, सुख, विभूषण, पदक, अलंकार एवं मान–सम्मान पाएका कतिपय भाग्यमानी व्यक्तिले आफ्नो महिमा गाउँदै पुस्तक लेख्दा शाहको चर्चा गरेको पाइन्छ । ती पुस्तकमध्ये धेरैजस...
प्रधानमन्त्रीलाई एउटी बालिकाको मार्मिक पत्र : के यहाँको राज्य हाम्रा लागि चाहिँ होइन ?
मंगलबार, फाल्गुण २९, २०७४
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, नमस्कार ! अहिले सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालका भित्ताभरि ‘भाइरल’ भइरहेको ‘बोक्सी आरोपमा किशोरी कुटपिट’सम्बन्धी समाचार र त्यसको प्रत्यक्ष भिडियो हेरेपछि तपाईंलाई यो पत्र लेख्न बाध्य भएकी छु । प्रधानमन्त्रीज्यू, अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको दिन विश्वले नै महिलाका लागि यसो गर्नेछौँ, उसो गर्नेछौँ भनेर भाषण गरिरहेका वेला हाम्रै देशको कैलाली जिल्लाको घोडाघोडी—५, देउ...
रजनीकान्तसँग छेउमा बस्दा बढ्यो कुकुरको भाउ, ४ करोडसम्म तिर्न फ्यानको हानथाप
मुम्बई । निर्देशक पीए रञ्जीतको चलचित्र ‘काला’ २७ अप्रिलका दिन रिलिज हुँदैछ । यो चलचित्रको टिजर केही दिन अघि आएको थियो । चलचित्रको पोस्टर पनि केही दिन अघि सार्वजनिक गरिएको थियो जसमा सपुरस्टार रजनीकान्तसँग एउटा कुकुर देखाइएको छ । अहिले सो कुकुरलाई किन्नका लागि रजनीकान्तका फ्यानहरुको ताँती लागेको छ । अहिले कुकुरका लागि उनीहरु ४ करोड रुपैयाँसम्म तिर्न तयार देखिएका छन् । व्यवसायिक कुकुर प्...
बुधबार, फाल्गुण २३, २०७४
- विश्वास हमाल नेपाल रहँदा मुस्किलले दुई/तीन पटक कफी खाइयो होला । तर,विदेश छिरेपछि एक–दुई कप भन्दाभन्दै कफी खाने लत लाग्यो । चिसो मौसम, सधैँको काम अनि थाकेको शरीरलाई कफीले केही मात्र भए पनि राहत दिने रहेछ । अहिले त काठमाडौं नै कफी संस्कृतिमा चुर्लुम्मै डुब्न थालिसकेछ । केही महिनाअघि नेपाल जाँदा लाजिम्पाट वरपर घुम्दै थिएँ । एउटा सामान्य कफी पसलमा छिरेर कफी मगाएँ । कडा र स्वादिलो थियो, कफी । तर, ...
– उमेश चौहान कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा शेरबहादुर देउवा फेरि निर्वाचित भएका छन् । देशको वरिष्ठ प्रजातान्त्रिक दलले प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट आफ्नो नेता छान्दा कोही कसैलाई आपत्ति हुने ठाउँ छैन । संसदीय निर्वाचनमा कांग्रेसको असाधारण पराजयपछि नेतृत्व परिवर्तनका लागि उठेको बिगुल ध्वनि फेरि नेपथ्यमा हराएकोमा पनि कसैलाई आश्चर्य लागेको छैन । आश्चर्य के छ भने, कांग्रेस पुनर्निर्माणको शिलान्यास समारोह स...
त्यो कालो दिन : सुगौली सन्धि स्वीकार गरि विशाल नेपालको एक तिहाइ भूभाग गुमाएको दिन
सोमबार, फाल्गुण २१, २०७४
रतन भण्डारी, नेपालसँग युद्धको निहुँ खोजिरहेको इष्ट–इण्डिया कम्पनी सन् १८११ देखि बुटवल–स्यूराजबारे बखेडा झिकिरहेको थियो । सन् १८१३ मा कम्पनी सरकारले नेपाललाई विवादित क्षेत्रबारे वार्ताका लागि बोलायो । वार्ताका लागि चन्द्रशेखर उपाध्याय बेतिया पुगे । तर माक्र्विस् वारेन हेस्टिङ्स गभर्नर नियुक्त भएपछि कम्पनी सरकारका प्रतिनिधि ब्राड शाले विना संवाद चन्द्रशेखर उपाध्यायलाई अपमानित ढंगले फिर्ता पठाए ।...
जब प्रेमीले विवाहकालागि कुमारीत्व जाँच्ने प्रस्ताव राख्यो..!
आइतबार, फाल्गुण २०, २०७४
कुरा कार्तिक महिनाको तिहार ताकाको हो रे । रातीको १० बजे पछि नम्रतालाई उनको साथी सुशीलाको फोन आयो, र कुनै सम्बोधन नै नगरि निकै आक्रोशित आवाजमा शुरुमै सोधियो रे–“ओए ! मायामा विश्वास दिलाउन के शरिर नै सुुम्पनु पर्ने हो र ?” नम्रता अक्कनबक्क पर्छे र आश्चर्य मान्दै सोध्छे–“के भन्छे यो ? बौलाउन त लाईनेस् ? कस्ले के भन्यो र तलाई ?” अरु कस्ले हुन्छ र ? तलाई भनेकी थिएँ त ? उही के, मैले माया गर्ने गजे । ...
यी चार गायिकाहरु : जो बलिउड नायिकाहरू भन्दा धेरै सुन्दर र हट छन, जसलाई देखेर तपाई मुग्छ हुनुहुनेछ
शनिबार, फाल्गुण १२, २०७४
काठमाडौं - यदि तपाईं सुन्दरताबारे कुरा गर्नुहुन्छ भने बलिउड हिरोइनहरुको बारेमा अवश्य नै कुरा गर्नुहुन्छ । जहाँ तपाइँ एक से एक सुन्दर नायिका देख्नुहुनेछ किनकि सुन्दरता मात्र यो क्षेत्रमा काम लाग्छ । वलिउड उद्योगमा हिरोइनहरुमात्र सुन्दर छन् भन्ने होइन । वलिउड उधोगमा धेरै सुन्दर गायिकाहरु पनि छन् । समयसँगै अहिले गायिकाहरु निकै सुन्दर र सेक्सी हुन थालेका छन् । त्यसैले अहिले वलिउडमा सुन्दरता नायिका...
भ्रष्टाचारीहरुलाई पनि ड्याम्म ईन्काउन्टर गर्न मिल्दैन?
सरगम भट्टराई -नेपालमा मृत्युदण्डको क़ानून छैन तर सरकारले चाहने हो भने गुण्डा नाईकेहरुलाई यसरी ड्याम्म ईन्काउन्टर गर्न मिल्ने रहेछ नि ! मोस्ट वान्टेड अभियुक्त मनोज पुन र सोम आले प्रहरी ईन्काउन्टरमा मारिएको घटना पछि बिभिन्न राजनैतिक र ब्यावसायिक आवरणमा गुण्डागर्दी गरी लुटपाट र हत्या गर्नेहरु पक्कै पनि निरुत्साहित भएको हुनुपर्छ। यो ईन्काउन्टर हो या हत्या हो त्यो संग मलाई ब्यक्तिगत रुपमा कुनै सरोकार ...
मोदी भर्सेस राहुल : भारतमा कसले रोक्ला मोदीलाई?